लघुकथा : ठेकेदार गजबलाल - Yessamachar
लघुकथा : ठेकेदार गजबलाल
२ भदौ, काठमाडौं । बिहानै खबर आयो । बनाएकाे दुइ बर्षमै राजमार्गको पुल गर्लम्मै ढलेछ । राजमार्ग अबरुद्ध छ रे । ठेकेदार गजबलाललाई मिडियाहरुको फोन आईरहेको थियो । उच्च रक्तचापको औषधी खाईरहेका गजबलालले नेताज्यूलाई तत्काल घरमा बोलाए । हस्याङफस्याङ गर्दै नेताज्यू ठेकेदारकोमा आए ।
ठेकेदार जंगिए “चुनाव जित्न मेरै पैसो,नेताज्यु बन्न मेरै पैसो,फलानोलाई मन्त्री बनाउन मेरै पैसो,अैले पुल भत्किदा ठेकेदार गजबलालको मात्र नाम ?”
ठेकेदारले थपे ,” मेरै पैसाले काठमाडौँमा घर जोड्नुपर्ने,फलानीलाई कार किन्दिनुपर्ने ” नेताज्यू पसिनाले लुछु्प्प हुँदै जसरी पनि कुरा मिलाएर ठेकेदारलाई निर्दोष साबीत गर्ने भन्दै कुलेलाम ठोकीहाले । त्यो एक दिन फोन स्विच अफ गरेर ठेकेदार रिसोर्टतर्फ फ्रेस हुन लागे ।
अर्को दिन बिहान ठेकेदारको सहयोगी चिच्याँउदै कोठामै आईपुग्यो । सहयोगीले उत्साहीत हुँदै समाचार पढेर सुनायाे ,” हलानो राजमार्गको फलानो पुल भाँचीनुमा ठेकेदार गजबलाल दोषी नरहेको पाईएको छ । पुलमुनि खोलामा अनौठो खालको जनावरले हाछ्युँ गर्दा उत्पन्न कम्पनले पुल भाँचीन गएको सरकारी प्रतिवेदनले बताएको छ ।”
त्यत्तिकैमा ठेकेदारले नेताज्यूलाई फोनमार्फत धन्यबाद दिँदै जनताले पताउलान् त भनि प्रश्न गरे । नेताज्यूले हाँस्दै जवाफ फर्काए , “नेपाली हुन पताईहाल्छन नि । ”
Previous articleदक्षिण कोरियामा विदेशी कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नु पर्ने
Next articleप्युठानमा जंगली च्याउ खाँदा दाजुभाइको मृत्यु
अमिताभ बच्चनले सुरु गरे ‘केबीसी १२’ करमवीर स्पेसल एपीसोडको छायांकन
Yessamachar - भदौ २८, २०७७ 0
एजेन्सी । कौन बनेगा करोडपति १२ का होस्ट तथा बलिउड महानायक अमिताभ बच्चननले हालै करमवीर नामक स्पेसल एपिसोडको छायांकन गरेका छन् । यस विशेष एपिसोडमा...
सुशान्त र रियाले लकडाउनमा पाँचसय ग्राम गाँजा रियाको घर पठाइएको एनसीबीको दाबी
Yessamachar - भदौ २६, २०७७ 0
एजेन्सी । सुशान्तको मृत्यु प्रकरणमा ड्रग्सको कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले सुशान्त र रियाले लकडाउनमा आधाकिलो क्युरेटेड गाँजा रियाको घरमा पठाएको पत्ता लगाएको छ ।...
लघुकथा – मेरो च्याट ब्वाय
Yessamachar - भदौ २५, २०७७ 0
तनहुँ मिलिक्क हरियो बत्ती बल्यो। "हेल्लो!माइ ड्रीम गर्ल! के गर्दै छौ?"-ह्याप्पी इमोजिका साथ मेसेज आयो। उसकै प्रतीक्षामा थिएँ।प्रतीक्षाको फल मीठो हुन्छ भने झैँ उसको उपस्थितिमा रमाउन...